अन्तिम पटक केसीलाई साथ दिऔं
भक्तप्रसाद गैरे - कलियुगमा मानिसहरुले गर्न सक्ने सबै किसिमका पाप गर्छन् भनेर त्रेतायुगमै नारद ऋषिले ब्रह्मासँग गरेको वार्तालापलाई रामायणमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जस्तो कि प्राय: सबै मानिस आफ्नो काम बनाउन धेरै झुट बोल्ने, हत्या हिंसा गर्ने, व्यभिचारी हुने, अर्काको धन सम्पत्ति हडप्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने, धर्म छाड्ने, अन्याय गर्ने, पैसाको लोभमा हरेक दुश्कर्म गर्ने, आदि।
ज्योती तिवारी - हामीले आवेदन दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पाउनु पर्ने अनापत्ति पत्र आएको छैन। यो कोठाबाट त्यो कोठाको चक्कर लगाउनुबाहेक केही हात परेको छैन हामीलाई। अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा अनापत्ति पत्र लिनु फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा कम छैन।
जयराम पुडासैनी - देशको सीमा हजारौं स्थानमा मिचिएका छन्–ओली बेखबर जस्तै छन्। अचम्म–ओली यस्तै भएपनि उग्रराष्ट्रवादी भएका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका ओलीले ‘संघीयता लागू गर्न खोजे जनताले खारेज गर्ने’ भनेर आफ्नो असली नियत बोले भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। यो अभिव्यक्ति ओलीको अन्तरमन थियो। किनकी ओली पछिल्लो परिवर्तनको पक्षमा कहिल्यै उभिएनन्। यिनै ओली हुन ०६२÷०६३ को आन्दोलनलाई उल्टो खिसिगरेर आन्दोलनको सफलता भनेको ठेलागाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भन्थे। यो परिवर्तित अग्रगमनमा ओलीको उदासिनताबाहेक कुनै देन छैन। यो टिप्पणी ‘ओली गफ र राष्ट्रवाद’ मा मदहोस भएकाहरु प्रति हो। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि के गरे? प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीका मुख्य तीन जिम्मेवारी थिए।
बालकृष्ण थापा, वरिष्ठ न्युरोसर्जन - सिआइबीले नेपालमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी तहका सर्टिफिकेटहरु नक्कली भएको प्रमाणका आधारमा एउटा अनुसन्धान थालेको छ र त्यसलाइ दिइएको नाम हो अपरेशन क्वाक । सिआइबीले अपरेशन क्वाकको नाममा नक्कली डाक्टर भनेर धमाधम पक्रने काम गरेको छ, र धेरैतिरबाट उसलाइ सहानुभूति पनि मिलेको छ ।
मधु भण्डारी - विगत ११ वर्षको इतिहासमा उपसचिव र सहसचिवको लिखित परिक्षामा उतिर्ण हुने १ जना पनि आयोग अन्तर्गतका कर्मचारी अन्तर्वार्ताबाट अनुतिर्ण हुन परेन। पक्कै पनि यो संयोग मात्र त होइन होला ? किन अन्तर्वार्तामा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई बढी नम्बर प्रदान गरिन्छ ? खुलातर्फको सहसचिव र उपसचिवमा आयोग कै कर्मचारी उतीर्ण भएको विषयले बजारमा राम्रै चर्चा पाएको छ।
पदम प्रसाद पौडेल - हाल यो ग्रेड पोइन्ट लाई ४ ले भाग गरी १०० ले गुणा गरेर प्रतिशत निकाल्ने गरेको पाइन्छ तर यो तरिकाले प्रतिशत निकाल्ने पद्धति गलत हो। साधारण तरिकाले प्रतिशत निकाल्न देशभरबाट सम्बन्धित बिषयमा उच्च नम्बर ल्याउने विद्यार्थीको नम्बर पत्ता लगाएर त्यसबाट आफ्नो ग्रेड पोइन्टलाई नम्बरमा र नम्बरलाई प्रतिशतमा बदल्न सकिन्छ। यसरी निकालेको प्रतिशत हामिले गलत तरिकाले निकालेको प्रतिशत भन्दा अवश्य कम हुन जान्छ। त्यसैले कसैले जिपिए ४ ल्यायो भने उसले १००% ल्याएको मानिदैन तर उसको नम्बर/स्तर तुलनात्मक तरिकाले सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ।
जयराम पुडासैनी - देश र जनता यति ठूलो पीडामा छन् कि प्रधानमन्त्रीको भाषणले लाग्छ उनीहरुलाई गिज्याइरहेको छ। जस्ता र पालको छानोबाट तप्पतप्प पानी चुहिरहेका बेला टेलिभिजनहरुमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भाषण सुन्दा पीडितहरुले के भन्लान्? सरकारले सबैभन्दा पहिला पीडितको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने होइन? त्यसमाथि सरकारी कामकाज यति झन्झटिलो छ कि पीडितले आवश्यक कागज तयार पार्न नै मुस्किल पर्ने अवस्था छ। मेरो काँध गलेको छैन भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब भूकम्प पीडितको आँसु पुछ्न थाल्ने बेला भएन र?
विज्ञापनमा ‘नयाँ शक्ति’
सन्देश अर्याल, काठमाण्डौ। - छोटो समयमै चलेको नयाँ शक्ति अभियान र यसले गरेको खर्चको तौर तरिकाबारे धेरै प्रश्न उठेका छन्। पछिल्ला दिनमा उनले यसको स्रोत प्रष्ट्याउने कोशिस गर्लान्। साथै विज्ञापनको नारालाई स्थापित गराउने उद्द्त गर्लान्। तथापी मारुती सिमेन्टले ‘हामी बनाउँदैछौं नेपाललाई’ भने झैं कसैले पत्याउने छैनन्। र भन्नेछन् यो यौटा प्रचार हो। प्रचारमा स्प्राइट खाएर बाटो सफा हुन्छ। तर साँच्चिकै बाटो सफा हुँदैन्।
नयाँ शक्तिको तामझाम
भक्तप्रसाद गैरै - घोषणा कार्यक्रममा खर्च गर्ने २ करोड भूकम्प पीडितको घर बनाउन खर्च गरे हुन्न? धुर्मुस सुन्तलीले पहरी वस्तीको निर्माणपछि अहिले गिरानचाैर एकीकृत बस्ति निर्माणमा जुटेका छन्। आफूसंग अत्यन्त कम आर्थिक स्रोत भएका उनीहरुलाई अहिले देश विदेशबाट सहयोग जारी छ जसले गर्दा उनीहरुले भूकम्प पीडितलाई अत्यन्त ठूलो सहयोग गर्न सकिरहेका छन्। के नयाँ शक्तिले समेत त्यस्तो गर्न सक्दैन? आफै नगरे धुर्मुस सुन्तलीलाई सहयोग गरे हुन्न? प्रचारबाजी बहुत गर्ने पार्टी घोषणा नै तामझामसंग गर्नेले आफूलाई नयाँ शक्ति भन्न अलि सुहाएन कि?
माल पाएर पनि चाल नपाएका हामी
मधु पाण्डे - हामी यस्तै सरकारी अस्तव्यस्तताका कारण आफ्नो देशसँगै बामे सरेका देशहरुको दाँजोबाट धेरै पछाडि पर्दै आइरहेका छौं । हिजोका दिनमा हाम्रो देशबाट भोकमरी लागेर खाद्यान्न सहयोग पठाएको देश कोरिया कहाँ पुग्यो । हामी आफैं ती देशमा अदक्ष कामदार बनेर जानु परेको छ ।
कसको लागि बन्द कामरेड?
प्रकाश थापा - मजदुरको लागि लड्ने पार्टी भनेर, फेरि पनि बन्द सफल बनाउन, मजदुर कै ट्याक्सी जलाउने होलानी होइन कामरेड, बन्दलाई सफल बनाउन. दिनकै मजदुरी गरेर खाने मजदुरको गाँस खोस्ने होलानी होइन कामरेड,
बेरोजगारलाई भत्ता होईन रोजगार देउ
गंगा बस्याल - देशको यस्तो डरलाग्दो समस्यालाई एउटा सानो ललिपप दिएर दबाउनु भन्दा दिर्घकालिन विकल्प खोज्नु आवश्यक छ। आवश्यक छ स्रोत अनि साधनको उत्खनन गर्न। आवश्यक छ देशमै उघोगधन्दा खोल्न। अनि आवश्यक छ देशका युवाशक्तिको श्रम, पसिना अनि उर्जालाई देशकै लागि खर्चिन। तसर्थ निदाउन नसक्नेलाई सिलिपिङ ट्याबलेट दिएर सुताउनु पक्कै मुर्खता हो बल्की निदाउने वातावरण बनाउनु बुद्धिमानी हो। बेरोजगारलाई भत्ता होईन रोजगारको जरुरी छ।
हावाहुरी चलेपछि बनेको माओवादी केन्द्र
केशवप्रसाद पाण्डे - फुटमा जुटभन्दा धेरै गुणा पीडा छ। जबकि जुट्नु फुट्नुभन्दा कयौं गुणा राम्रो हो तर माओवादी एकता ठीक विपरीत भयो। १२ वर्षसम्म सँगै जनयुध्द लडेको तत्कालीन नेकपा माओवादी दर्जनौं टुक्रामा विभाजित भएर शान्ति प्रकियामा आइसकेपश्चात छोटो समयमै लामो फुटको फेरिहस्त बनायो।
ग्राण्डी अस्पतालको ध्यानाकर्षण
प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवाली - आइतबार सेतोपाटीमा प्रकाशित अस्पतालले उपचारमा ठगेको आरोप शीर्षकको समाचार प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। यो समाचार सरासर भ्रमपूर्ण समाचार भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं।
मुस्लिम गठबन्धनको नैतिकता
करिमबक्स मियाँ - हडबडी के ब्याह कनपट्टी मे सिन्दुर भने झैं मधेसी मोर्चासित मिलेर गरेको आन्दोलनले यतिखेर राष्ट्रिय मुस्लिम संर्घष गठवन्धनलाई “न्याउरी मारी पछुतो” भएको छ । २०७२ भाद्र ३० गते जारी भएको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा होमिएका मधेसी दलहरुसित मिलेर आन्दोलित हुनु मुस्लिम गठवन्धनलाई यतिखेर महँगो सावित भएको छ ।
ट्राफिकमा किन ब्यक्ति परीवर्तन भएपछि सिस्टम परिवर्तन?
तिर्थ गुरूङ - केही समय वा महिना भयो उपत्यका ट्राफिकको नेतृत्व परिवर्तन भएको। नयाँ नेतृत्वले केही परीवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ, मतलब आधुनिकीकरण गर्न खोज्नु भएको छ। यसमा हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ भन्ने म ठान्छु। तर, कतिपय स्थानमा ट्राफिक व्यस्थापन हिजोको भन्दा दय...
अल्का अर्याल - सक्षम व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने र असक्षम व्यक्ति आरक्षणको माध्यमद्वारा उच्च स्थानमा पुग्दा आफ्नो क्षमताले कार्यभार सम्हाल्न, आफ्ना सामु आइपरेका चुनौती सामना गर्न असमर्थ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
हामी कहिलेसम्म अर्काको मुख ताकेर बस्ने?
निराजन श्रेष्ठ - के नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहले सधैं भरि विदेशका चिल्ला सडकमा खिचिएका फोटोहरु वा तिनका छोराछोरीले विदेश गएर विदेशका चिल्ला सडक छेउमा खिचिएका फोटोहरु फेसबुकमा पोष्टिएकोमा मख्ख भई बस्ने? के नेपालको राजनैतिक नेतृत्व आफैंले केही गर्न सक्छौं, आफैंले केही सपना देख्न सक्छौं र त्यसलाई आफ्नै क्षमतमा पूरा गर्न सक्ने तागत पनि राख्छौं भन्ने आत्मविश्वास गुमाइसकेको हो? के नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहको उच्चतम खुशी भनेको छोराछोरीले PR/Green Card पाउँदा पार्टी दिने र हर्षले उफ्रने नै हो? निश्चय नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै आयोजना सम्पन्न गर्न त्यही स्तरको प्राविधिक क्षमता र व्यवस्थापकीय कौशलको आवश्यकता पर्छ, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले संकीर्ण स्वार्थ, लोभ र कुखुरेछाति बोकेर मात्र हिंड्ने हो भने चाहिं पक्कै पनि यस्ता आयोजना नेपालले बनाउन सक्ने छैनन्।
निजी कलेजमा असमान शुल्क
अविज्ञा नेपाल - मनलागी शुल्क लिने कुरामा त रोक्ने हिम्मत कसले उठाउला र? सबैले यस्तो नगरेका होलान् तर जोबाट असमान, भेदभाव भइरहेको छ उनीहरूमाथि यो प्रश्न हो मेरो। म बिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्यनरत् विद्यार्थी हुँ। मैले केही नलुकाई भन्नुपर्दा मसँग स्कुल पढेका साथीहरू विभिन्न कलेजमा छरिएका छन्। एउटै कलेजमा एउटै कक्षामा बस्ने साथीहरूलाई सोध्यौं भने उनीहरूको मुखबाट भिन्न–भिन्न शुल्क सुन्नु परेको छ। जसलाई छात्रवृत्ति दिइने हो, त्यसलाई थाँती राखिएको छ। समानस्तरका विद्यार्थीमा पनि भिन्न–भिन्न शुल्क उठाइएको छ।
तनाबमा विद्यार्थी, कथित ब्रिज कोर्स र तयारी कक्षा
सुबास पोखरेल - पढाई तथा परीक्षा सकिए लगत्तै बरु सकिन्छ भने शहरबजारको घुँइचो, प्रदुषण, कोलाहाल र अशान्त माहोलबाट २/३ साता कतै भ्रमणमा जाँदा निकै राम्रो हुने स्वास्थ्य विज्ञले सुझाएका छन्। यसो गर्दा मानव मष्तिश्कमा सफा र स्वच्छ हावाले गर्दा नयाँ ऊर्जा पैदा गर्दछ।
अच्युत राज भट्टराई - तिम्रो दोष पनि हैन यसमा पैसामा आँखा सबैको लाग्छ घुस खान्छौ तिमी छोरालाई महंगो शिक्षा दिन तर 'पाप' भन्ने कुरा ले तिम्रो छोरालाई ड्रग्स खाने बनाउँछ घुस खान्छौ तिमी छोरीलाई महँगो ठाउँमा शिक्षा दिन त्यो पैसा पुग्छ अर्कै ठाउँमा घुस खान्छौ तिमी बुडीलाई गहना किन्न बुडीको चाहना अर्कै तिर जान थाल्छ
राष्ट्रिय सरकारको अावश्यकता
जयराम पुडासैनी - विगत दुई दिनयता प्रचार गरिएका ढंगको फेरि अर्को गठबन्धन’ बन्नबाट मुलुक जोगिएको छ। तर, दुई दलको बजेट सम्मको सहयात्राले मात्र मुलुकको यावत् समस्याको समाधान दिन सक्दैन। राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा कम्तीमा कांग्रेसलगायत प्रमुख तीन दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो।
ल! आमाको मुख हेर...
प्रदिप सुबेदी - नौ भाई छोराछोरीमा यही एउटा त छ नि मसँग दुःख मा साथ दे को छ अरू छोराछोरी त लाखापाखा लागेका छन् जेठोले श्वासनी छोराछोरी लगेर अम्रिका हानिएको दशै साल भयो माइलो कतारमा काम गर्छ श्वासनी छोरालाई पढाउन भन्दै बजारमा बसेकी छे। कान्छो खै!! कुन पार्टीको काम गर्छु भन्छ महिनामा एसो एक दुई पटक आउँछ जान्छ केही भन्दैन अब ज्वरो आउँदा पनि पानी दिने त यही साइलो छोरो त होनी छोरी सबै अर्काको घर गए यस्को एउटी खोजेर बिहे गर्दिना पाए मरे नि शान्तिले श्वास फेर्थेँ होला मुख त देखाइदिनु परो भन्दै पछि फर्किए छोरो त छैन साइला मुख हेर्न आईजा भनेर बोलाए उस्ले आमा भात खाँदै छु भन्यो बिचरा भोक लागेको होला खा! बाबु खा भने फेरि साइली छोरीको फुन बज्यो आमा मुख हेरे भनी हेर छोरी हेर अब जमानै यस्ता फुन मै मुख देख्न पाएसी तिमीहरुलाई के चाहियो र
मलाई नजन्माउने आमा
सिर्जना बस्नेत - यसको मतलव मलाई मेरो जन्म दिने आमा प्रति गुनासो र घृणा भने छैन बरू सम्मान छ। उनले मलाई वेवारिसे छाड्नुमा पनि कुनै ठूलो कारण हुनसक्छ वा त्यो वेलाको परिस्थिति त्यस्तै थियो। कति महान छिन मेरी आमा म गर्भमै भएको बेला पनि कति धेरै समस्या र चुनौती थिए होलान् तर पनि उनले मलाई यो धर्तीमा ल्याएर छाडिन्। उनले चाहेको भए मलाई जन्म नै नगराई मृत्युको मुखमा सुम्पिन सक्थिन्। तर, मेरी आमा तिमी कति महान रहिछौ आफूले दुःखको पहाड बोकेर पनि मलाई सन्तुष्टिको मैदानमा सुम्पिएर गयौं।
खगेन्द्र फुयाँल - जहाँ दिनदहाडै जनता लुटिन्छन् । विद्यालयबाट अभिभावक विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी कण्डक्टरबाट यात्रु डाक्टरबाट बिरामी प्रहरीबाट जनता सेवा केन्द्रबाट सेवाग्राही हाकिमबाट कर्मचारी घरबेटीबाट डेरावाला व्यापारीबाट ग्राहक नेताबाट कार्यकर्ता
उही हो श्रमिक
शिवहरी दाहाल - जो कसैको बोलि र भाषणको पछि नलागि, आफ्नो धर्म र कर्मको पालनामा लाग्दछ । जो कसैको झुठो आश्वासनको प्रवाह नगरी, लगनशिलता र कर्तव्यलाई अँगाल्दछ । हो, उही हो श्रमिक । जो विशाल मुढाहरु चिर्ने करौँतिका दाँतजस्तै, आफ्ना पाखुरीले, जीन्दगीका झुपडिहरू सिंगार्छ । जो आकाशलाई छानो हालि ढुंगाको सिरानीमा मस्त निदाउँदै, विशाल गगनचुम्बि अपार्टमेन्टहरू उभ्याउँछ र संसारलाई त्यसको रमिते बनाउँछ । हो, उही हो श्रमिक ।
मैनबत्ती पग्ल्यो,बेलुन उड्यो!
दर्शन अर्याल - सभ्यता,सस्कृति,प्रकृतिले सम्पन्न नेपाल भनेर गर्ब गर्न पछि नपर्ने जोकोही जिम्मेवार नेपाली बन्नुपर्छ। कुनै पनि नेपालीले सामान्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्तिको उपाय खोज्नुपर्छ। रोग,भोक,सोक,अशिक्षा र गरिबीबाट आम नेपालीलाई मुक्ति दिने उपाय खोज्नुपर्छ। तब बन्छ सम्वृद्ध नेपाल। अनि बाल्नु मैनबत्ती र फुक्नु बेलुनमा हावा।
केन्द्रमा पुनर्निर्माणको नारा घन्काउँदैमा नयाँ घर बन्दैन
सुजन रेग्मी - कति छचल्किए यी आँखाहरूमा आँसु, कति यादहरू यो दिल छोडेर कहिलै जान मान्दैनन्, यो प्राविधिकको मनमा पनि केहि सम्झना लुकेको छ, नपोखिकन बसिरहन सकिनँ। जतिसुकै ठेलीहरू पढौँ,जतिसुकै सैदान्तिक बनौँ, वास्तविकता फरक हुने गर्छ। चार वर्से इन्जिनियरिङ अध्ययनमा कठोर भइसकेको मन बिस्तारै पग्लिदैछ। यही मनले भोगेका केही तथ्य पस्कन लागेको छु। भूकम्पले थिलोथिलो पारेर पालमुनि आश्रम लिईरहेका व्यक्तिको वासस्थान निर्माणको पहिलो चरणको लगत संकलन कार्यक्रममा आफूलाई सहभागी गराउन पाउँदा केही हदसम्म खुसी मिलेको छ। काठमाडौंको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको पाँच दिने प्रशिक्षणपछि हामी करिब ६० जना इन्जिनियर गोर्खा हानियौँ। गोरखा,जि.वि.सको कार्यालयमा आफूलाई पर्ने गाविसको नाम सुनाइयो र परिचालकसँग भेट गराइयो।
क्यान निलम्बनबाट पाठ सिकौं
जयराम पुडासैनी, बौद्ध-६ काठमाडौं - हेक्का के राख्नुपर्छ भने खेलकुद राष्ट्रिय इज्जत र गौरवसँग जोडिएको हुन्छ। आइसीसीको निलम्बनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ। यो निलम्बनले विवादलाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्दै नेपाली क्रिकेटलाई विकासको बाटोमा डोर्याउने अवसरमा बदल्न सक्दामात्रै फाइदा हुन्छ। विडम्बना, राखेप नेतृत्व निरन्तर हस्तक्षेप र कब्जाको योजनामै छ। खेलकुदका मूल्य–मान्यताप्रति उसको खास चासो देखिन्न। दलीय कब्जाको रणनीतिमा नियुक्ति लिएका विष्टले राजनीतिक छत्रछायाँमा जे पनि गर्न थाल्ने हो भने उनलाई निश्चय पनि सहज हुने छैन। आइसीसीको कारबाहीलाई पाठका रूपमा मनन गर्दै राखेपले क्यानमाथि गरेको हस्तक्षेप फिर्ता लिएर इमानदारीपूर्वक अभिभावकको भूमिकामा फर्किंदा कतिपय समस्या स्वतः समाधान हुने देखिन्छ।
सम्झिन छ एकछिन छोडिजाने प्रेमिल आत्मालाई
रमा भट्टराई - एक बिहानी विहान भईसकेपछि पनि मेरो आँखामा अध्यारो बढ्दै थियो एक साँझ साझ पर्नु अघिदेखि नै मेरो आखाँमा निष्पट्ट अध्यारो छाएको थियो । समय, मलाई दु:खमा चोबलेर आफू उत्सव मनाउँदै थियो। आकाश हिजो जस्तै थियो, फरक यति थियो, पहिला मैले आकाश उ...